Soomaaliya kartaye Kenya kulaylku ma gaaray?! – Bashiir M. Xersi
Date: 10 Oct 2013Author: Bashiir M. Xersi 0 Comments
Hadda ka hor baa laba beel waxaa dhexmaray dirir qaraar, dabadeed dagaalkii ayaa wuxuu yeeshay saameyn ballaaran, oo ay gaartay, in loo dakaneeyo qof walba, oo labadaas reer ka mid ah, wuxuu doonaba ha noqdee. Maalin maalmaha kamid ah ayaa niman hubeysan oo dakano hore qaba, waxay gacanta ku dhigeen nin la oran jiray RAAGE oo u dhashay beesha kale, ee dirirtu kala dhaxaysay.
Intii aan RAAGE la dilin, ayaa dadkii tuulada daganaa oo dhan la isugu wacay, si ay goobjoog iyo shaahid uga ahaadaan sida loo gawracayo ninkii Raage ahaa, si loo jirxumeeyo loona xanuujiyo beesha kale. Intaas uguma simine waxay sii raaciyeen inay ku dul shirbaan maydka korkiisa, oo markaas ayagoo sida muuqata ku raaxaysanaya shanqarta ka soo baxaysa Odayga la gowracay ku Shirbeen:
Ciidanka Kenya waxay gudaha Soomaaliya ku jiraan laba sano oo maalmo dhimman. 16 OKTOOBAR 2011 ayey ahayd markii ay oggolaasho iyo ogaal la’aan umadda iyo dawladda Soomaaliyeed ku soo galeen dalka, in kasta oo uu markaa ka dhiidhiyey Madaxweyne Shariif, haddana, waxaa inta daba maray heshiis dhagareed la soo xasiixday Cabdi Wali Gaas, oo ahaa Wasiirka koowaad. Heshiiskaas beenta ah iyo waraaqaha aan astaan lahayn ee kala jeeda, ee la kala saxiixday ayey ilaa hadda Kenya ku joogtaa dalka gudihiisa, balse, markii dambe dirqi iyo danaysi ugu biirtay ciidanka Amisom oo sida dhacdooyinku muujiyeen ayba ka madax bannaan yihiin.
Faalladan kooban kuma soo koobi karo inta kol ee Ciidanka Kenya ay gawrac iyo qoor goyn ka gaysteen deegaannada ku teedsan ee xaduudka aan la wadaagno, heer ay markii dambe dilka u adeegsatay Godin iyo Faas, xabbado dhaqaalaysi kama ahayn nacaybka inta uu gaamursan yahay unbay muujinaysaa. Taa kaliya ma ahan, midda ugu xanuunka badan uguna xun baa ah: DUQAYNTA JOOGTA AH, GANTAALAHA AAN DHAMMAADKA LAHAYN ee badda ama berriga laga ridayo, iyo XAQSUUQA AAN JOOGSIGA LAHAYN ee maalin walba ka dhaca Koofurta Soomaaliya, gaar ahaan Gobollada Jubbooyinka iyo Gedo, oo ay gaystaan Ciidamda Kenya, oo dalka ku soo galay xoog, itaal iyo oggolaasho la’aan.
Kenya itaal aan meel jirin iyo cudud aan caymin doonin inay leedahay ayadoo og ayey Soomaaliya isku qaadday, in kasta oo looga digay haddana, ma dhaganaysan waanada iyo talada loo soo jeedshay, la yiri: “Nin meelo u caddahay, meeli ka madoobe” waxay gabbaad iyo ka dhigatay gidaar inay ku dhuumato Alshabaab ayaan baacsanayn oo qatar ku ah ammaanka Kenya.
Hubaal inuusan ahayn eray dhagaha Soomaali ku cusub, Soomaalidu xagga xusuusta aad bay ugu liidataaye, aan bal xashka ka soo gooyo xilliga naloo adeegsaday si dalka loo soo galo dadkana loo xasuuqo, waa sanadkii 2006dii, waxaana adeegsaday Xabashi, kuwa maalintaa ay ka hor tagaysay in kasta oo maanta lagu sheego QUN-YAR-SOCOD aniguse aan iraa: QUUD-YAR DABA SOCOD, haddana Alshabaab iyo iyagu waa isla DHAL ITIXAAD, oo war walba sabab u ah in Soomaaliya ay soo galaan ciidan shisheeye ee leh waxaan duullaan ku nahay Argagixiso qatar ku ah ammaanka geyiga iyo nabadda gobolka.
Marka hore sida dhabtu tahay tiro iyo tayo ALSHABAAB Soomaali waa ku badan yihiin, haddana, ma is weydiisay maamulka iyo maarayntoodu sida uu yahay? Ma is weydiisay nimankii teer iyo maalintii Maxkamadaha dunida ay ku daba jirtay inay Soomaali yihiin in kale? Taa oo kuu caddaynaysa inay yihiin koox ay ku dhan yihiin dhalashooyinka dunida, waxaa ku jira: Maraynkan, Ingiriis, Yaman, Keenyaati, Suuriyaan, Afgaanistaan IQKB. Haddaba, intaa oo dhan ayey ka kooban yihiine, maxaad idigu isu galinaysaa cuqdadda ah Alshabaab waa Soomaali? Maya Alshabaab Soomaali ma ahan, ee waa koox Argagixiso ah oo xiriir la leh Alqaacida, ee aan lahayn dhalasho iyo dhaqan.
Anaga kooxdan iyada oo shaarar iyo shulugyo kala cayn wadata way na soo martay, markaa dunidu waxay u haysatay inay anaga noo gaar tahay, sida in badanba maanta u haystaan in Alshabaab Soomaali tahay, balse, dunidu waxay indhaha kala furtya markii uu dillaacay DAACUUNKII MAXKAMADAHA, oo ay hoggaanka dalka qabteen WADAADDADII WAALLIDU WADDAY, sababtoo ah Soomaaliya 2001 waxay ku jirtay waddamada qarka u saarnaa inuu duqeeyo Maraykanku, balse, maalintaa waxan uga badbaadnay: 1- Inaan Soomaaliya ka dhisnayn maamul Daalibaan oo kale ah. 2- Inaannaan lahayn ilo dhaqaale oo Argagixisadu si sahlan uga macaashi karto, sida Geedaha Daroogada ee ka baxa Afgaanistaan ama Dheemman, sida: Dahab, Qalin iyo Macaadin kale.
In kasta oo Kenya ay waligeed hooy iyo hargalba u ahayd Argagixisada, haddana taa uma muuqato, oo 1998 Usama Bin Ladin iyo raggiisu waxay qaraxyo waaweyn ka gaysteen safaaradaha Maraykanku ku kala lahaa Kenya iyo Tanzaaniya. Sidoo kale, waxaa bishii November sandkii 2002 la beegsaday Hotel magaciisa la yiraa “The Paradise Hotel” oo ku yaal Magaalada Mambasa ee Isla Kenya iyo diyaarad ka duulaysay garon diyaaradeed. Dhacdooyinkan oo dhacay xilli xitaa uusan jirin magaca Alshabaab, taa oo ka dhigaysa inaan Soomaali iyo Alshabaab xiriir iyo shaqo la lahayn ayaa kuu muujinaya in Kenya ay qar iska xoor ku soo gashay Soomaaliya, oo ay ku habboonayd inay isku daydo inay dalkeeda bal marka hore ay ka soo xorayso Argagixisada deggan ama ku dhuumaalaynaysa.
Kulaylkii ILMO ITIXAAD nagu hayey muddo ayaa nagula daawaday oo marna la lahaa waxa Soomaali dhexdeeda ka dhacaya maxaa naga galay? Marna la lahaa waa dad aan wax ay ku heshiinayaan jirin, marna la lahaa awalba fawdo fawdo ayey dhashaaye maxay filaynayeen Soomaalidu? Kenya waxay safka hore uga jirtay dawladaha in muddo ah nagu wiirsanayey, ee kaaga darane, argagixisadu ay xarumo ku lahaayeen inta aanba ALSHABAABTAN la unkin.
Waxaa la yiri: “Geeridii Gableed laga sheego, gondahaaga ka filee” dhibkii in badan nalagu eegtay ee marar badanna dadkeenna siyaabo kala duwan loogu xasuuqay Xabashi iyo Kenyaba, maata Kenya ayey dul hogan tahay, “Bowdo rag maalinba midbaa qaawan” maahmaah ayey ahayd, adduunyana waa laba gallin oo is daba maraya, guhaad iyo gacalnimo ayey u dhaxaysaa, afartii maalin ee Suuqa loo yaqaan “West Gate Mall” ee magaalada Nayroobi la haystay wixii ka dhacay waxay QAYB YAR ka yihiin inta Soomaali 2006-2013 ay Argagixisadu u gaysteen, asii mar walba oo afka la kala qaado Soomaalida dhan loogu jaa’ifaynayey inay Alshabaab yihiin.
Qaabka loo maareeyey “West Gate Mall” oo aad u liitay ciidan, cudud iyo cirbixinba ka sokow, waxaa bannaan yaal noqotay iyo marag ma doonto in maanta wixii ka dambeeya ay Kenya si rasmi ah ugu biirtay dawladaha fashilmay, haddii ay awal Soomaali ku wiirsan jireen, maanta wixii ka dambeeya waa la siman yahay ee maanta ha tashtaan, maxaa yeelay, waxaan wada xasuusanna laba fal oo caynkaa ah inay Muqdisho ka kala dheceen xarumaha Gobolka Banaadir iyo UNDP, haddana, maalmo iska daaye, saacado ma qaadan in laga xoreeyo argagixisada xarumahaa, ha malayn inaan faaninayo Soomaali, balse, waa sida wax u dheceen, taariikhdana gashay. Bal adba.
Mar kale aan sooyaalka colaadda hal qabsi kale ka soo qaatee, waqti hore ayaa laba beel oo daris wadaag ah dagaallameen, markaa ayaa nin labada beel mid ka mid ah ka dhashay wuxuu yiri: “Markaan maqlo beeshiinnii waa la soo jabshay, waxaan isku dayaa inaan qoslo, markaa ayaa illimu iga timaaddaa [daadataa], markaanse maqlo beeshii kale ayaa dabada looga dhacay, waxaan isku dayaa inaan illimeeyo, markaa ayaan qosol ku dhuftaa!” maarayn xumada Kenya ee ay sida liidata u hagtay dhacdada West Gate Moll, waxay kuu muujin inay ka adag yihiin inay Soomaalida kaliya weydiiyaan “Leta Kipanda iyo Leta Kitambulisho” si ay mar walba laaluush iyo lacag uga qaataan. Haddii Watergate oo dhacday 1972 ay noqotay fadeexaddii qarnigii tagay, fadeexadda West Gate Moll-na waxay noqon doontaa fadeexadda qarnigan.
Hadda kuwan cusub ee la doortana wali eray lagama hayo, iyadoo uu dhacay xasuuqii ugu darnee ee deegaanka  Jannaay Cabdalla, ee hal qoys uu ku dabar go’ay, baaris iyo dabagal iska daaye, xitaa ma cambaarayn, Alla maxaa shalay maanta u ekaysiiyey? Kuwii laga guulaystay iyo kuwii guulaystay maxaa isku dhaqan ka dhigay? Saw lama lahayn isbadal baa dhacay? Mise eraga wax dhaafsiisan markii horaba ma dhicin? Oo haddaa sidee loo sugaa wax ka gaddisan? Bal adba.
Shibta Madaxda Soomaalida, shanqar la’aanta dunida, shabaaxa diyaaradaha Kenya iyo qaylada shacabku kala sheelan. Midi wuxuu eeganayaa dantiisa, siduu kursiga dabada ugu sii hayn lahaa. Midna dabargo’a Soomaalida waa ka indha damuuqsaday. Midka kale, isaga ayaaba fulinaya, oo waa ku farayaraysanayaa, waxaana u muuqda afar wiil oo afka duubatay, naguna qancinayaa inuu qaflan baabayn ku qabanayo. Kan ugu dambeeya qayladiisa xitaa ma maqli karo, illeen waxaa dhaga tiray guuxa diyaaradaha iyo madaafiicda ay daryaaminayaan.
Previous Previous post: Uhuru: Soomaali afkaaga ka duw!
Next Next post: Soomaalida Libya iyo Munaasabadda Iidda